Ireto afisy ireto dia mampiseho ny fomba tsy fanaovana selfie any Russia | Androidsis
Ny governemantan'i Russia dia namoaka torolàlana iray hanehoana ny fomba TSY tokony hanaovana Selfies. Ary tsy sangisangy izany
Russia. Io firenena lehibe io, tanin'ny mpiady mahery fo sy olona adala. Amin'ny toerana izay Ny Windows Phone dia mivarotra tsara kokoa noho ny vokatra Apple afaka manantena fihetsika marani-tsaina isika. Ary ny farany izay nataon'ny fanjakana rosiana dia ny fary.
Ary izany tokoa Ny Ministeran'ny Atitany Rosiana dia namoaka torolàlana mampiseho izay fanao tsy tokony hatao rehefa maka sary-tena amin'ny finday, selfie tsara izay lamaody ankehitriny kokoa hiantsoana izany. Ary ronono ny afisin'izy ireo.
Ity ny fampielezan-kevitra vaovao ataon'ny Minisiteran'ny Atitany any Russia manohitra ny fanao ratsy rehefa manao selfie
Mampiseho andiana sary miaraka amin'ilay lohateny Safe Selfie izay anehoana azy ilay torolàlanan toe-javatra mety hitranga izany dia mety hitranga rehefa maka sary-tena amin'ny toe-javatra sasany. Tsy dia mampihomehy ve ireo afisy?
Raha milaza aminao aho fa nandritra an'ity taona ity dia nisoratra anarana ny polisy rosiana folo ny maty ary efa ho zato no naratra raha nanandrana nanao vivery ny ainy ny seho iray amin'ny alàlan'ny fiovan'ny sarin'ny tena manokana, sa tsy izany?
Ary izany ve ny sasany Ireo sary navoakan'izy ireo tao amin'ny torolàlana dia mifototra amin'ny zava-misy marina. Mahita ny sarin'ny piktogramy miaraka am-basy ve ianao? Eny, tovovavy iray no nitifitra ny lohany tamin'ny basy vita amin'ny fingotra nanandrana naka sary selfie te hahafantatra. Ohatra iray hafa amin'ny hadalan'ny olombelona, ​​maninona no lavina ...
Ny marina dia ny lohahevitra momba ny selfies dia avy amin'ny volontany mankany amin'ny maizina. Azoko tsara fa lasa lamaody izy io ary olona an-tapitrisany no maniry ny hanao sary an-tsary ny sary miaraka amin'izy ireo eo alohan'izay, izay mangatsiatsiaka tokoa, tsy misy mandà izany. Saingy manao vy very ny ainao amin'ny fomba izay tsy mitovy amin'ny adalany mba hahatonga ny sary ho mangatsiaka kokoa? Raha ny marina dia toa adala izany amiko.
Ahoana ny hevitrao momba ny vaovaos pictograms an'ny Minisiteran'ny Atitany Rosiana hisorohana ny olom-pireneny tsy hamono tena rehefa mitady hanao selfie? Miombon-kevitra amin'izy ireo ve ianao sa mieritreritra ianao fa ny manondro basy feno bala fingotra amin'ny loha dia hevitra tsara ny maka sary ary ny fampitandremana famantarana ny loza mety hitranga dia mihoapampana fotsiny?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny governemantan'i Russia dia namoaka torolàlana iray hanehoana ny fomba TSY tokony hanaovana Selfies. Ary tsy sangisangy izany
OnePlus dia afaka mandefa kinova telo an'ny OnePlus Two
Fitsapana hafainganam-pandeha Androidsis: LG G2 VS LG G4